Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Degmada Awdhiigle Iyo Deegaanada Hoostaga. – Bogga Calamada.com
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Degmada Awdhiigle Iyo Deegaanada Hoostaga.
February 12, 2018 6:22 pm Views: 463
Wararka laga helayo gobalka Shabeelada hoose waxey sheegayaan in gelinkii dambe ee maanta ay ciidamada huwanta ah oo isugu jira Saliibiyiinta Mareykan iyo AMISOM ay dib uga gurteen degmada Awdheegle iyo deegaannada,Daaru-Salaam, Mubaarak iyo Ugunji oo dagaallo culus marti geliyay maanta gelinkii hore.
Ciidamo aad u hubeysan oo katirsan Shabaabul Mujaahidiin ayaa gaaf wareegaya deegaannadii lagu dagaallamay iyagoo baaritaanno ku haya goobihii ay saacadaha kooban ku sugnaayeen ciidamada shisheeye.
Intii ay ciidamada shisheeye ku sugnaayeen deegaannada hoos yimaad degmada Awdheegley waxay xad gudubyo ugeysteen dadka deegaanka, goob joogayaal ayaa xaqiijiyay in laba qof oo uu kamid ahaa Oday dhaqameed ay ciidamada kufaarta ah ku dileen deegaanka Mubaarak, sidoo kale dhac iyo boob ayay ka geysteen goobaha ganacsiga deegaannaddii ay cagta mariyeen.
Ciidamada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa illaa iyo 6 weerar u dhigay ciidamada huwanta ah intii ay ku sugnaayeen duleedka Awdhgeele, weerarada ugu badan waxay ka dhaceen Mubaarak iyo Ugunji, ciidamada shisheeye ee weerarka qaaday saaka aroortii hore ayaa isugu jiray AMISOM,American iyo Maleeshiyaadka calooshood u shaqeystayaasha Bangaraafta loo yaqaan.